Waxaa iga dhumay xayawaankayga - King County
Iibsashada ama cusboonaysiiyo shatiga xayawaanka Barnaamijka korinta xayawaanka Waxaa iga dhumay xayawaankayga
Xayawaanka lagu soo helay raadinta Mapa interactivo
Waxaan soo helay xayawaan baadi ah Iska soo wareejinta xayawaanka Jawaab celinta xakamaynta xayawaanka
Waxaa iga dhumay xayawaankayga
Illaha Xayawaanka Dhumay
Waxaa Isticmaali Kara Dhakhtarka Xayawaanka oo Keliya:
Waaxda Adeegyada Xayawaanka Goboleedka ee King County waxay siisaa daryeelka xayawaanka oo gacan ku hayntooda 25 magaalo oo heshiis la leh iyo deegaanada iskood u taagan ee King County. Haddii aad ku nooshahay aagga adeegeena, waxa ay u badan tahay in xayawaanka ka maqan naloo keeni doono kama dambeytsa. Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii aad ku nooshahay aagga adeegeena, waxaan kula talinaynaa inaad ka raadiso dhammaan hoyga maxalliga marka aad goobayso xayawaan lumay.
Markaanu helno xayawaanka lunsan, waxaan isku dayi doonaa si aan u aqoonsano xayawaanka oo u wacno qofkii iska lahaa. Taasi waa sababta ay shatiyada xayawaanku muhiimka u yihiin. Xayawaanka shatiga leh waxaa lagugu soo celin karaa si degdeg ah. Haddii xayawaankaaga shatiga leh uu soo qabto mid ka mid ah saraakiisheena xakamaynta xayawaanka, waxaan isku dayi doona inaannu si toos ah u geyno xayawaanka gurigaaga.
Haddii xayawaanka uusan haysan shati ama Aqoonsi, ama haddii aan guriga isla markiiba loo soo celin karin, waxaanu geyn doona oo ku hayn doona xayawaanka Xarunta Korinta Xayawaanka ee Kent si loogu badbaadiyo halkaas. Xayawaanka lunsan ee aan shatiga haysan waxaa lagu hayn doona muddo saddex maalmood xarunta si loogu oggolaado inay milkiilayaashu u soo doontaan. Xayawaanka shatiga leh waxaa la hayn doona ugu yaraan shan maalmood.
Xayawaanka lagu soo helay raadinta
Riix badhanka hoose si aad uga raadiso database-keena xayawaanka hadda lagu hayo hoyga Xarunta Korinta Xayawaanka.
Ogeysiin: Fariin duuban oo xayawaankii la soo qabtay maalin kahor ayaa sidoo kale la maqli karo adigoo wacaya 206-296-7387 (PETS). Ku qor 1211 si aad u maqasho liiska eeyaha, ama 1212 liiska bisadaha.
Raadinta Xayawaanka LA HELAY
Diiwaangelinta Xayawaanka Lumay
Ku dar macluumaadka xayawaanka ka maqan database-keena xayawaanka baadida adigoo riixaya badhanka ku haboon ee hoose. Waxaa lagugu soo sheegi doonaa email haddii xayawaan leh tilmaamo u eg midka xayawaankaaga lagu soo daro database-keena. Inkasta oo aan sameeyno dadaal kasta si aannu u hubsano in warbixinteenu noqoto mid saxsan, hadana waa inaad adiguna soo hubiso in xayawaankaaga uu ku jiro xarunta Korinta Xayawaanka ee Kent iyo in kale.